Sidee looga Ciidey Garowe maanta
19 Aug 19, 2012 - 3:09:03 AM
Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr.Cabdiraxman Maxamed Maxamuud Farole ayaa maanta 19 August,2012 kumanaan dadweyne kula tukadey Salaada Ciida garoonka kubadda cagta magaalada Garowe ee Mire Awaare.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Gen.Cabdisamad Cali Shire ,gudoomiyaha Barlamanka Cabdirashiid Maxamed Xirsi ,wasiirada xukuumadda ,mudanyaasha aqalka wakiilada ,odayaasha dhaqanka ,qurbajoog ,aqoonyahano ,culimo iyo kumanaan kale oo dadweyne ah isuguna jirey dhalinyaro ,haween yar yar iyo duqeyba iska leh ayaa si wadajir ah ugu tukadey Mire Awaare.
Ka hor Salaada Ciida ayaa khubado kooban madasha laga soo jeediyey oo Culimadu door ku lahayd bilowgii islamarkaasinay ka shekeeyeen fadliga ay lahayd Bishii Ramadan aynu soo dhaagney iyagoona Alle uga baryeyey in Soonka uu ka aqbalo dhamaan umadda Islaamka ah.
Islaan Ciise Islaan Maxamed ayaa dhankiisa u duceeyey umadda in ilaahay nabada iyo xasiloonida u xoojiyo waxana uu ku booriyey dadka inay dowladda kala shaqeeyaan sidii dalka nabadgelyadiisa loo xaqiijin lahaa.
Islaanku Somalia waxa uu sheegey in maanta ay mareyso xaalad adag oo u baahan in la iska kaashado sidii wadajir looga gudbi lahaa is loo gaaro dowaldnimada aynu tiigsaneyno.
Wasiirka Cadaalada iyo arrimaha diinta Dr.Cabdi Khaliif Xaaji Xasan Ajaayo ayaa isna kalamado kooban ka yiri meesha waxana uu xooga saarey amaanka iyo dhamaan dhinacyadu iska gacan qabtaan xoojintiisa.
Ugu danbeyntii Madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiraxman Farole ayaa lagu soo dhaweyey oo u hanbaleyey dadweynaha munaasabada Ciida awgeed ,waxana uu soo qaatey arrimo dhowr ah oo kamid ahayd Amaanka ,Dhaqaalaaha iyo weliba halka ay mareyso hawsha geedi socodka nabada Somalia.
Amaanka ayuu ku celiyey madaxweynuhu in saameyn ku yeeshey barakacii koonfur Al-shabaab looga saarey fariisimo badan isagoona meesha aan ka saarin in dilalka qorshaysani yihiin qorshe argagixiso oo u siyaasadeysan qaab qabiil.
Madaxweynuhu waxa uu qirey mar kale in dhaqaalaha Puntland hoos u dhac ku yimid iyadoona ay dhacdey in shilinkii Somaliga la waayo islamarkaasina Doolarku uu ku bato suuqyada.
Waxa uu sheegey in lacago la soo sameynayo oo ka dhaqan galaya dalka marki ay dhalato dowladda Soomaaliyeed ee haatan hawsheedu socoto isagoona rajo wanaagsan ka muujiyey in dhibaatada dhaqaale ay ku tagi doonto imaatinka lacagahaasi.
Ganacsatada ayuu raaciyey inasan bixin cashuuraha iyo dadka guud ahaan si loogu shaqeeyo waaxyaha kala duwan ee dowladda waxana uu tibaaxey Dr.Farole in canshuurta lacagta ay dadku ku bixiyaan dib ugu soo laabaneyso oo faa’ido u noqoneyso sida amaankooda oo laga shaqeeyo.
Xulista mudanayaasha Barlamanka Somalia iyo faragelin iyo cabsi gelin lagu hayo xubanah guddiga farsamo ee xulista xubnaha ayuu soo qaatey isagoona cadeeyey inay jiraan dad ka soo horjeeda nidaamka Federaalka oo jagooyin sar sare dalka tartan ugu jira sidii ay u hanan lahaayeen.
DAAWO:Khubadda Madaxweynaha Puntland ee Ciida Garowe 19 08 2012
Wadooyinka waawey ee magaalada Garowe ayaa dadweyne faro badan iyo gaadiid lagu arkayey iyadoona la is weydaarsanayey ‘’Ciid Wanaagsan’’ ‘’Ciid Mubaarak’’,waxana sidoo kale jirey caruur iyana si qurxoon loogu labisey kuna watey gacmaha qalabka kala duwan ee ciida ku ciyaaraan.
Bahda Garowe Online Umadda Somaliyeed ayay ugu tahniyadeyneysaa Ciida Barakeysan waxana alle uga rajeyneynaa sanadkan sanadkiisa inaan ku gaarno Nabad ,Guul iyo Somalia oo mid ah.
Halkan ka daawo sawiradda sida looga ciidey Garowe Maanta
Qaybta 1aad Sawiradda Ciida Garowe Qaybta 2aad Sawiradda Ciida Garowe
Qaybta 3aad Sawiradda Ciida Garowe
Halkan ka dhageyso khudbadda Madaxweynaha Puntland ee Ciida